Labo ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan horyaalka Ingiriiska oo ku tartamaya saxiixa laacibka Wolves ee Adama Traore – Gool FM
(England) 20 Jan 2020. Kooxo badan oo ka dhisan qaaradda Yurub ayaa horraan baacsanayay laacibka garabka uga ciyaara kooxda Wolves ee Adama Traore iyadoo shaki badan la galinayo mustaqbalkiisa.
Kooxaha Liverpool iyo Manchester City ayaa ku dagaallamaya saxiixa laacibka reer Spain, halka Leeds United qudheedu ay quud darreyneyso soo xero gelinta Traore.
Wargeyska Isbaanishka ah ee Sport ayaa werinaya in Reds, Man City iyo Leeds ay dhammaantood doonayaan saxiixa 24-jirkan inta lagu gudo jiro bishan Jannaayo oo ay ka harsan tahay wax ka yar labo toddobaad.
Warsidahan ayaa sidoo kale baahiyay in Wolves ay dooneyso inay xiddigeeda ku iibiso lacag dhan 35.5 milyan oo gini, inkastoo ay adagtahay inay xilligan fasaxdo.
Kooxda Macallin Nuno Espirito Santo ayaa ka dhiidhineysa inay fasaxdo Traore maadaama ay jirto tiro yaraan xiddigaheeda weerarka ah kaddib markii ay xagaagii Liverpool ka iibisay Diogo Jota, sidoo kalena uu dhaawac waqti dheer ah uu galay Raul Jimenez.
Si kastaba ha ahaatee, Adama Traore ayaa xilli ciyaareed adag la qaadanaya naadigiisa Wolves isagoo ku fashilmay inuu gool dhaliyo 18 kulan oo uu fasalkan ka ciyaaray horyaalka Premier League, halka uu caawiyay kaliya hal gool.
RASMI: Naadiga UEFA ee sanadka oo la soo saaray... (Ronaldo, Messi iyo Lewandowski oo hor kacaya kooxda & Neymar oo qayb ka ah)